Home Kedu ihe kpatara Akụkọ nwata
Anyị na-eme ndị egwuregwu bọọlụ nwata ka ha wee mee ka ndị ozi mara banyere akụkọ banyere ndị egwuregwu ha hụrụ n'anya. LifeBogger na-ejide akụkọ kachasị egwu, ihe ịtụnanya na ihe na-atọ ụtọ banyere kpakpando ndị egwuregwu na-ezo aka n'oge ha bụ nwata ruo taa. Nke ahụ bụ anyị!
Mmadu niile no n’elu uwa nwere akuko gbasara nwata na ndi n’egwuregwu football esiteghi na mbara ala di iche. O bughi ha abuo nwere ikike di elu na ikike ikike ọgụgụ isi. Ha bụ n'ezie ụmụ mmadụ ga - esi agụta agbụrụ ha na ndị nna ochie nke ụwa.
Ya mere, dị ka mmadụ niile, ndị egwuregwu, ndị njikwa ya na ọbụna ọgbọ egwuregwu ahụ nwere akụkọ nwata, nke na-akọ banyere ihe ndị na-atọ ụtọ ma na-akpali akpali site na mgbe ha dị obere site na oge ntorobịa ruo na mgbe ha toro.
Nkọwa akụkọ Lifebogger pụtara ihe omume nwata banyere ndị na-agba bọl, ndị njikwa na ndị amara. Site na LR: Van Dijk, Luka Modric, Kylian Mbappe, Zidine Zidane na Aleksander Ceferin. Ebe E Si Nweta Foto: LB.
At Lifebogger, anyị na - ejide akụkọ ndụ ụmụaka ndị dị otú ahụ nke bụ ihe dị mkpa na akụkọ ndụ mmadụ na - atọ ụtọ nke anyị na - ewetara banyere ndị egwuregwu football, ndị njikwa na agụmakwụkwọ gburugburu ụwa.
Ihe kpatara ezigbo ebumnuche dị otú a bụ itinye aka na oke anyị maka imeziwanye egwuregwu bọọlụ, na-eburu n'uche na ihe mgbu nwata, uru yana mmerụ nke ndị egwuregwu bọọlụ, ndị njikwa na agụmakwụkwọ agaghị enye naanị ụfọdụ n'ime ihe bara uru bara uru na ndu gi kama inwe mmasi n’ebe ndi n’ego njem ha di.
Akụkọ ndụ mmadụ ma ọ bụ akụkọ akụkọ eziokwu dị mkpa nye ndị na-eto eto nwere mmasị na football n'etiti ihe ndị ọzọ. Ebe E Si Nweta Foto: GhHeadlines.
Na nkenke, isiokwu a bu inye ndị na-ege anyị ntị echiche zuru oke banyere ihe anyị bụ site n'igosi ihe omume mmalite nke ndị na - eme egwuregwu football, ndị njikwa na ndị maara ọkwa n'okpuru isiokwu ndị na - adọrọ mmasị nke ọma, ndị edere ederede na ndị na - akpali akpali.
Ihe kpatara Akụkọ nwata - Ndị na-egwu bọl na Elite ndị amụtara ogbenye
A mụrụ ụfọdụ ndị ama ama na ndị aka ochie na ndị ogbenye, ụfọdụ eketaghị ihe ọ bụla, ndị ọzọ rụrụ ọrụ iji wezuga onwe ha pụọ ​​na ịda ogbenye. N'agbanyeghị etu ihe si kwụrụ, ịda ogbenye bụ n'ezie ihe na-akpali akpali nke dugara ndị nwoke a ma ama na akụkọ akụ na ụba.
Okwu mkpụrụedemede 7 nke edeghị ede na atụ ụjọ na-emetụta ndụ na ịrị elu nke Cristiano Ronaldo, weputa ihe kacha mma n’ime Luis Suarez, ọ dịghịkwa agbachitere elites; Roman Abramovich na Gianni Infantino kama emere Gebriel Jesus na-ebili ka ama ama maka otutu umuaka umu aka umuaka na Brazil.
Ahụhụ mana ọchị ọchị, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Gianni Infantino na Gabriel Jesus na-agbasi mgba ike n'oge ndụ ha. Ebe E Si Nweta Foto: LB.
Vertyda ogbenye ghọrọ ihe mkpali dị egwu n'agbanyeghị na ọ dị mwute maka ndị egwuregwu a. Ọ bụ ihe obi ụtọ na egwuregwu bọl ghọrọ ụgbọala maka ha ịkwalite ọnọdụ ego ha.
Ihe kpatara Akụkọ nwata - Ndị na-egwu bọl na Elite ndị amụrụ Ọgaranya
N'akụkụ ntụgharị ahụ, a mụrụ ọtụtụ ndị na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ na ndị amara, ụfọdụ na-eji ọlaọcha ọlaọcha na ndị ọzọ nwere pacifiers diamond. N'ihi ya, ha bidola ezigbo ndụ wee bie nnukwu ụkọ ogbenye.
Ndị nwere mmasị na Aleksander Caferin na Michel Platini akwadoro nkwado ha mkpa ibi ndụ dị ukwuu ebe ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ na-amasị Mario Gotze, Andrea Pirlo na Gerard Pique abụghị ndị bịara abịa nye akụ̀ na ụba tupu ha enweta aha ha.
Mario Gotze, Gerard Pique na Andrea Pirlo bụ ndị a mụrụ n'ezinụlọ ndị bara ọgaranya. Ebe E Si Nweta Foto: LB.
Ihe kpatara Akụkọ nwata - Ndị egwuregwu bọọlụ bụ ndị lanarịrị agha na ọgba aghara dịka ụmụaka
Enweghị ike ịkọ akụkọ nwata nke ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọzọ na-egwu egwuregwu na-enweghị ịdọpụ ndị agbapụ site na njem na-agbawa obi nke agha obodo na ọgba aghara nke gaara ekpochapụ ndị egwuregwu ahụ adị.
Ileba anya na ndu ndi ala Nigeria Victor Moses na-ekwu banyere mmetụta ọjọọ nke ọgba aghara na Northern Nigeria, emekwala Juan Cuadrado na Serge Aurier na-enwe obi ụtọ icheta ihe ike na obodo Colombia na Necocli na Ivory Coast n'otu n'otu.
Juan Cuadrado bụ otu n'ime ndị egwuregwu bọọlụ ole na ole lanarịrị agha na ọgba aghara n'oge ha bụ nwata. Ebe E Si Nweta Foto: LB.
Ihe kpatara Akụkọ nwata - Ndị egwuregwu bọọlụ, ọ gaara adịla ogologo oge ha bụ nwatakịrị
Ogologo oge tupu ọ mata banyere egwuregwu nke ịgba bọl, Diego Costa nwere ahụmịhe ọjọọ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ndụ ya lara.
Ihe omume dị egwu mere n’oge ahụ Costa dị nanị ọnwa isii. Mama ya hapụrụ ya ka ọ gaa saa efere. Obere ura Costa dina n’elu akwa ya n’ime ụlọ ebe ọ maghị na agwọ dị n’azụ ya. Mgbe nne ya si na kichin lọta n'ihe ndina Costa, ọ hụrụ agwọ ọjọọ na-erute nwa ya.
Josileide da Silva Costa echewo na ọ bụ mpempe teepu, mana ihe a ọ tụlere ka teepu na-aga n'akụkụ nwa ya. Site na mmeghari ngwa ngwa, ọ dọbara aka Costa ngwa ngwa iji zere ya ka agwọ ọjọọ ahụ zọpụtara ndụ ya.
Ihe kpatara Akụkọ nwata - Ndị egwuregwu bọọlụ bụ ndị nna ha bụ Legọs nke egwuregwu ahụ
Enweghị agọnarị eziokwu ahụ bụ na ndụmọdụ enyerela ndị na-agba bọọlụ chọrọ ịlele anya n'ime onwe ha aka ọkachasị mgbe ndị ndụmọdụ abụghị ndị ọzọ mana ha bụ ndị nna nna ha.
N’etinyeghi aka dika nna, dika nwa nwoke, anyi nwere Thiago Alcantara onye luru nna-ya Mazinho. Ndị ọzọ gụnyere Saul Niguez onye zọhiere ije nile nke nna ya Antonio dịka Sergio Busquets onye gbara ndu dika nna ya Carlos. Ofdị ihe nketa ọ bụla ọzọ nwere ike ịba ọgaranya?
Thiago Alcantara, Saul Niguez na Sergio Busquets bụ ụmụ nwoke n’akụkọ egwuregwu bọl. Ebe E Si Nweta Foto: LB.
Ihe kpatara Akụkọ nwata - Ndị egwuregwu bọọlụ bụ ndị si n'ụlọ akwụkwọ pụọ
Genmụ nwoke ole na ole nwere bọọlụ enweghị ndidi ịnọdụ ala na ịnọdụ ala na ịnara ntuziaka n'aka ndị nkuzi, ebe ụfọdụ ndị ọzọ agụghị ụlọ akwụkwọ sekọndrị ka ọrụ ịgba bọọlụ ha na-ebili n'ụzọ dị ebube n'oge ha nọ n’agbata afọ iri na ụma.
Ndị egwuregwu bọọlụ gụnyere akụkọ mgbe ochie dịka Pee, yanakwa onye ama ama ama na mba Brazil na onye nnọchite anya Barcelona - Ronaldinho. Ga na ndị egwuregwu n'ime afọ iri puku afọ - n'oge edere - anyị nwere ụdị nke Cristiano Ronaldo na kpakpando Barcelona - Lionel Messi onye na-agụchaghị akwụkwọ agụmakwụkwọ.
Ronaldinho, Messi na Pele nwere agụmakwụkwọ na-akwụghị ụgwọ n'oge ọ bụ nwata. Ebe E Si Nweta Foto: LB.
Ihe kpatara Akụkọ nwata - Ndị na-egwu bọl bọọlụ fọrọ nke nta ka ha kwụsị igwu egwu
A na-ekwu na mgbe ọ na - eme ike, ihe siri ike ga - aga. Anabataghị ikike nke maxim kemgbe afọ niile ọrụ mmadụ na-egbochi ịhapụ ịgba bọọlụ ọ bụla. N’ezie, o nyeela aka hụ na ụwa echefughi inweta ndị egwuregwu ịgba ọsọ egwuregwu nwere ike ịhapụ ịhapụ ọrụ ogologo oge.
Ọ bụghị ọtụtụ ndị maara nke ahụ Wayne Rooney si ịhụnanya maka football dara dị ka otu kaadi kaadị mgbe ọ dị obere nwa 14 dị afọ. N'otu aka ahụ, ọ garaghị enwe ihe na-atọ ụtọ Ibrahimovich na ụwa nke football ma ọ bụrụ na ọ bụghị na-ekwu okwu nke na-amasị ndụ na dockyards. N'akụkụ ya, Alisson Becker si ọ fọrọ nke nta ka nne na nna dọpụ ya na bọlbụ n'ihi na ọ na-edekọ uto nke mkpụrụ ndụ dị nwayọ ọbụna n’oge 15.
Nwa okorobịa Wayne Rooney na Ibrahimovich kwụsịrị ịgba bọl. Ebe E Si Nweta Foto: LB.
Ihe kpatara Akụkọ nwata - Ndị egwuregwu bọọlụ bidoro dịka ndị egwuregwu bọọlụ
Dynamics bụ okwu a na-ahụghị na ihe ọmụmụ physics, ọ dị na bọọlụ nyere na egwuregwu ahụ bụkwa ihe niile gbasara Physics. Ihe a na - ebido na usoro mbụ dị mkpa nke ndị na - agba ụkwụ ụkwụ na - eme n'oge ha dị obere site na ịgba bọlbụ maka egwuregwu a. Mgbe nke ahụ gasịrị, ha na-agba bọọlụ n'okporo ámá ma ọ bụ gaa n'ihu na-azụ ndị otu egwuregwu na ụlọ akwụkwọ mmuta.
Ọ bụ ezie na ndị egwuregwu na-agba bọl dị na ya, a na-anwale ha n'ọkwá dịgasị iche iche ruo mgbe e guzobere mpaghara ma ọ bụ forte siri ike. N'ihi ya, obughi ihe iju anya na ufodu siri n’agha wepu ebe iji chebe onwe ha dika ihe ndi n’agha ebe ole ma ole di ka. Thibaut Courtois dara nzọpụ na ịbụ onye na - agbachitere ya wee bụrụ onye na - agbachitere mgbaru ọsọ. N'otu aka ahụ David Gea bụ onye na-egwu egwu egwuregwu ruo mgbe ọ chere n'ime ụlọ n'etiti oke ihe mgbaru ọsọ.
David Gea na Thibaut Courtois buru ụzọ zụọ onwe ha dị ka ndị na-egwu egwuregwu dịpụrụ adịpụ tupu ha aghọọ ndị na-elekọta ụlọ. Ebe E Si Nweta Foto: LB.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Ihe Mere Akụkọ nwata. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kekọrịta anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Bọchị agbanwee: Ọktọba 14, 2020
Bọchị agbanwee: Ọktọba 3, 2020